Bangaki abantu abaye bezwa ngePanda Park? Ungasho ukuthi lokhu kuyinto entsha ngokuyisisekelo? Kuyingxenye kuphela. Izinhlobo ezinjalo zokuzijabulisa ezemidlalo zazikhona isikhathi eside. Kodwa, eqoqwe endaweni eyodwa, zimelela indlela entsha yokuzilibazisa kwezemidlalo kubantwana nakubantu abadala.
Okuningi mayelana nokuthi yikuphi "i-Panda Park"
Uma uhlela ngokufishane, ke lokhu kuyisethi yezithiyo okumelwe zinqotshwe, uhlelo lokugibela ngokukhethekile. Enye indawo ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi "ipaki lezintambo". Lokhu kungenxa yokuthi iningi lezithiyo okumelwe zincotshwe yizivakashi kwelinye lemizila yepaki zenzelwe ukusetshenziswa kwezindophi nezintambo ezihlukahlukene, futhi zitholakala ngaphezu komhlaba. Ukulungisa amadivaysi emagatsheni nasemithini yezihlahla, ngezinye izikhathi endaweni ephakeme kakhulu ngaphezu komhlaba (kuze kube ngamamitha amabili).
Ukunqoba izithiyo ezinjalo akudingi nje ukuqeqeshwa kwezemidlalo kuphela, kodwa futhi namandla okulinganisa. Futhi "i-Panda Park" ivumela lezi zimfanelo ukuba zikhuliswe kusukela ebuntwaneni. Inkimbinkimbi yalolu hlobo lokukhangisa inikeza abahlanganyeli umthamo omkhulu we-adrenaline. Ukuze unqobe ibhuloho lezintambo endaweni ephakeme kakhulu, okokuqala kudingekile ukunqoba umqondo wemvelo wesaba ngaphakathi kwakho. Kungumuntu ukwesaba ukuphakama. Futhi kungaba nombuzo ozwakalayo - ukuthi iziphephelo ezinjalo ziphephile kanjani emakhoneni ezintambo kanye namabhuloho okukhuni okhuni? Kodwa iPanda Park yenzelwe ochwepheshe. Futhi izinkinga zokuphepha zindawo yokuqala ebaluleke kakhulu. Ukuhamba kwezintambo kuhlangabezana nazo zonke izindlela. Ngaphezu kwalokho, leli paki linemizila eminingana yokuhamba, ehluke kakhulu enkingeni. Lokhu kwenziwa kubantu abanezigaba ezahlukene zokuqeqeshwa kwezemidlalo. Izindleko zetikithi zezivakashi zihlanganisa umsebenzi we-instructor-consultant wezemidlalo, ophethe imisebenzi ehlanganisa ukulawula umshwalense nokuhambisana nezimo zokuphepha. Iphrojekthi yepaki yenzelwe futhi isetshenziswe ngokuhambisana namazinga ezemvelo.
I-Panda Park eMoscow
Enhloko-dolobha, le phrojekthi yezokukhangisa zekhebula yenziwa futhi isebenza ngokuphumelelayo ezindaweni eziningana. Ngaphansi kwegama elithi "Panda Park" kunethiwekhi yonke yezindawo ezifanayo zokuphumula komndeni wezemidlalo. Ungakhetha lowo oseduze nawe. Lena yiParkvsky Park, neSokolniki, okukhangayo eLianozovo naseTsaritsyno. Futhi, yebo, ingadi yeNeskuchny eGorky Park. Izindlela ezintathu ezihlukene ngobude bomzila obuyinkimbinkimbi yengxenye yekhilomitha ziqala ekupheleni komgwaqo omkhulu. Izindleko zethikithi komzila owodwa omdala ungama-ruble angamakhulu amathathu. Kubantwana kuyinto eshibhile. Kukhona izinhlelo zamabhonasi nezaphulelo kuzivakashi ezivamile. Amapaki okukhangisa anikezwa ngamasevisi enkonzo nokuphepha. Ukuhamba kwemigwaqo kulawulwa ngabafundisi. Lena indawo enhle yokuchitha isikhathi lapha nezingane. Abaningi sebevele benesikhathi sokuliqonda, futhi uma kuphakama umbuzo mayelana nokuthi uzoya kuphi eholidini, khetha "i-Panda Park". Izithombe ezingenhla zibonisa ukuthi laba bantu banesikhathi esihle lapha.
Umhlahlandlela wokuvakasha: Izinto zokubuka eKargopol
Izinso: izifo ze-psychosomatic. Kungani kukhona amatshe ezinso
Umshini Ukwaluka "Neva-5": imfundo, ngebuhle nebubi
Afronaraschivanie Izinwele: Ukucaciswa, izinzuzo nezingozi, izibuyekezo zamakhasimende